« POCLAIN » 47 T NANDALO TEO KAMORO : Andrasana ny fepetra horaisin’ny Fanjakana mahefa
Tsy nahazo alalana handalo amin’ny tetezana Kamoro sy ny hafa ilay « Poclain » milanja 47t nefa tsy noraharahan’ny mpamily an’ity farany sy ny mpaniraka azy. Efa tonga any Ambilobe tamin’ny sabotsy teo ity fiara vaventy ity, izay araka ny feo mandeha dia ampiasaina amin’ny fitrandrahana volamena ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Betsiaka. 19 décembre 2016
« Ampiasaina amin’ny fanamboarana lalana Ambilobe-Betsiaka kosa io fitaovana io », hoy ny tompon’andraikitra iray, miara-miasa akaiky amin’ny orinasa mpitrandraka volamena ao Mantaly Maro, Kaominina ambanivohitra Betsiaka, nefa rehefa nanontaniana ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny minisiteran’ny Asa Vaventy, dia nilaza fa tsy marina izany.
Ny fantatra fa izy mihitsy no nanome baiko hisakanana ny fandalovan’izany « Poclain » izany ambonin’ny tetezana Kamoro izay tsy mahazaka afa-tsy 35t. Araka ny loharanom- baovao voaray, niantso an’io olon’ny minisitera io ireo tompon’andraikitra misahana ny filanjana fiara sy « engin » ao Maevatanàna tamin’ny fandalovan’ity « Poclain » ity tany an-toerana ka tamin’izany no nanambarany fa tsy nahazo alalana avy amin’ny minisitera ny tompon’ ilay « Poclain » sy ny mpamily azy ary tsy mitombona ny filazana fa hampiasaina amin’ny fanamboaran-dalana Ambilobe-Betsiaka no antony nalehany any.
Mahitahita, izay no azo ilazana ireo olona ambadika izao fandefasana ity fiara vaventy ity any amin’ny tapany Avaratry ny Nosy matoa sahy mandà ny baikon’ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Asa Vaventy. Tsara ihany no nahafantarana izany mba hialana amin’ny ahiahy tsy havanana. Satria raha tsy izay mety ho voatonontonona amin’ny raharaha fitrandrahana volamena tsy mazava loatra ataon’ny orinasa iray sy Sinoa ao amin’ny faritra Betsiaka ny minisitry ny Asa Vaventy. Mazava kosa ny resaka ankehitriny.
Tena marina hatramin’izao na dia eo aza ny fanazavana nentin’ireo iraky ny orinasa mpitrandraka volamena iray ao Mantaly Maro, izay milaza fa mifantoka amin’ny fanaovana asa soa no ataony ary manara-dalàna nandritra ny valandresaka nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety tao Antananarivo herinandro vitsivitsy lasa izay, dia mbola maro ny zavatra mifamahofaho anatin’izany. Porofon’ izany araka ny loharanom- baovao voaray eo anivon’ny minisiteran’ny harena an-kibon’ny tany tsy manaiky ny fidiran’izany « Poclain » izany ao Mantaly Maro sy ny faritra manodidina ny mponina ka mahatonga izany fitaovana izany mbola mijanona ao Ambilobe, hatramin’ ny alahady teo.
Matoa tsy manaiky ny fokonolona misy zavatra tsy mety any ho any. Andrasana kosa ny fepetra horaisin’ny Fanjakana mahefa manoloana ny tsy fanarahan- dalàna nataon’ny mpamily sy tompon’ity « Poclain » ity.